Waa maxay habka loo habeeyo sanduuqaaga hadiyadeed
Baakadaha sumadaha gaarka loo leeyahay ayaa noqda oo muuqaal caadi ah maalmahan, laga bilaabo shirkad weyn illaa ganacsi yar, dhammaantood waxay rabaan inay dhisaan sumcad shirkadeed iyaga oo adeegsanaya baakadeynteeda. Maaddaama baakiddu ay tahay tan ugu fudud, ugu raqiisan uguna dhaqsaha badan ee lagu faafiyo ujeeddada. Maanta, sida 10 sano oo khibrad ah warqad p ...
Eco-friendly hadda waxay noqoneysaa isbeddel, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa daneynaya maalinba maalinta ka dambeysa, maadaama aan wajaheyno kor u qaadista masiibooyinka ay sababaan burburka dabeecadda annaga. Anaga ahaan, soo saare ahaan sanduuqa wax lagu rido, had iyo jeer waxaa nala weydiyaa, haddii sanduuqaagu uu yahay mid nooluhu karayo? Marka hore, aan ogaanno waxa loo yaqaan biodegrada ...
Baakaduhu waxay u jiraan difaac ahaan badeecada gudaha ah, hase yeeshe, horumarka dhaqaalaha adduunka, baakaduhu waa inay ku daraan qiime dheeri ah. Si aad uga dhex muuqato muuqaalka macaamiisha maanta, waa inaad gaartid "wow factor", taas oo ka dhigaysa naqshadda baakadaha mid aad muhiim u ah. Laakiin sida loo qaabeeyo ...